mars 2018 · Page 2 de 6 · déliremadagascar
Socio-eco	 27 mars 2018 R Nirina
« MAISON DIGITALE » FIANARANTSOA : Vehivavy maro hahazo tombontsoa
Novatsian’ny fikambanana « orange Solidarité » fitaovana nomerika ahitana « tablettes » 10, « serveur Raspberry » iray, « imprimante » iray, « vidéo projecteur » iray, « clés USB » ary « ordinateurs portables » dimy ny « maison Digitale pour les Femmes » ao Isaha Fianarantsoa. Continuer la lecture →
politique	 27 mars 2018 R Nirina
ANTOKO HVM: Manameloka ny fanapoahana “grenade”
Raisin’ny antoko HVM ho resaka politika ny fanapoahana baomba tao amin’ny birao foiben’ny Antoko eny Antanimena. Araka ny fanazavana voaray, nisy nanipy “grenade” teo anoloan’ny tokontanin’ny birao ny sabotsy alin’ny 24 martsa 2018. Continuer la lecture →
FAMPANDROSOANA: Kaominina 992 nozaraina vola ampahibemaso
Kaominina 992 eto Madagasikara nahazo famatsiam-bola avy any amin’ny banky iraisam-pirenena. Samy nahazo vola mitentina 15 tapitrisa Ariary avy ireo kaominina ireo. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa PAPSP na Paik’Ady am-Pivoarana ny Sehatr’Asam-Panjakana izy ity. Continuer la lecture →
Socio-eco	 26 mars 2018 lynda
MPANAO KUNG-FU WISA BONGOLAVA: Nanambatra ny heriny
Nanao filaharam-be namakivaky ny tanànan’i Tsiroanomandidy ny solontenan’ny mpanao Kung-Fu ao amin’ny faritra Bongolava. 4000 ny mpandray anjara tamin’ny filaharam-be. Continuer la lecture →
politique	 24 mars 2018 lynda
DIDIER RATSIRAKA : Tsy niloa-bava
Feno 42 taona ny antoko Arema. Nankalazaina ny 24 martsa 2018 ny fitsingerenan’ny taona niforonany ny antoko izay tarihin’ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka . Continuer la lecture →
Socio-eco	 23 mars 2018 R Nirina
ONIVERSITE ACEEM: “Izay mahay ihany no afaka”
Mpianatry ny oniversite ACEEM Manakambahiny miisa 320 navoaka tamin’ny fomba ofisialy. Nisalotra ny anarana “Miatrika” ireto andiany ireto.
Anterivava : William RATREMA
Araka ny fanazavan’ny tale mpanorina ny vondrom-panabeazana ACEEM, William Ratrema nandritra ny lanonana famoahana azy ireo ny zoma 23 martsa 2018, teny amin’ny CCI Ivato, fa manahirana ny fiainana ka entina hitaizana ireto mpianatra ireto ho vonona hiatrika ny fahasarotan’ny fiainana no antony nisafidianana ny anaran’ny andiany. Andiany faha-8 ireo mpianatra nahazo ny mari-pahaizana Licence ary faha-4 kosa ireo mpianatra nahazo ny diplaoma Master. Nohamafisin’i William Ratrema fa miezaka mamolavola tanora tena manam-pahalalana ny oniversite. Matoa omena mari-pahaizana dia tena ny fahaizany no antony hanomezana azy. Tsy misy izany mari-pahaizana omena maimaim-poana izany fa izay mahay no afaka”, hoy i William Ratrema.
Fiarahamiasa any ivelany
Efa be dia be ireo mpianatry ny oniversite ACEEM no nanohy ny fianarany any ivelany. Miara-miasa amin’ny oniversite IESEG any Lille ny ACEEM. “Mampalahelo anefa indraindray fa tsy miverina eto an-tanindrazana intsony ireo mpianatra. Sekoly manan-danja ny IESEG ka hifandrombahan’ny orinasa any ivelany ny mpianatra mivoaka ao. Raha ny tokony ho izy anefa dia tokony hiverina eto an-toerana hanasoa ny firenena ireo mpianatra”, hoy ny filoha mpanorina ny vondrom-panabeazana ACEEM. Ankoatra izany, miara-miasa amin’ny orinasa avy eto an-toerana ihany koa ny oniversite ho fanamorana ny fampidirana ireo mpianatra amin’ny sehatry ny asa.
Non classé	 23 mars 2018 R Nirina
Réseau National des Femmes Handicapées de Madagascar: Famelabelaran-kevitra sy asasoa
« Vehivavy manana fahasembanana manao fanomezana ho an’ny zokiolona sahirana ». Io no endrika entin’ny Réseau National des Femmes Handicapées de Madagascar, RNFH mandray anjara, toy ny fikambanam-behivavy rehetra, mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho azy ireo, sady mbola volana martsa rahateo izao. Continuer la lecture →
Socio-eco	 22 mars 2018 R Nirina
RECEF: Ilaina ny vehivavy amin’ny fifidianana
Mampanjaka ny demokrasia ny fampandraisana anjara ny vehivavy sy ny vitsy an’isa amin’ny fifidianana. Amin’ny maha mpikambana an’i Madagasikara ao anatin’ny firenena mampiasa na amin’ny manontolo ny teny frantsay, nosafidian’ny RECEF (réseau des compétences électorales francophones) Continuer la lecture →